Umbiko we-2020 US Bathroom Trends: Amathoyilethi ahlakaniphile, ompompi bezinzwa, namakhabethe angokwezifiso okugeza azoduma!
Ikhaya / Blog / Umbiko we-2020 US Bathroom Trends: Amathoyilethi ahlakaniphile, ompompi bezinzwa, namakhabethe angokwezifiso okugeza azoduma!
2020 / 11 / 02 UkwahlukanisaBlog 6172 0
IHOUZZ, iwebhusayithi yezinsizakalo zasekhaya e-US, ikhipha ucwaningo lwaminyaka yonke lwezitayela zokugezela zase-US, futhi sekukhishwe nombiko wango-2020. Kulo nyaka, i-HOUZZ yahlola abanikazi bezindlu abangu-1,594 XNUMX baseMelika ababesanda kuvuselela izindlu zabo zangasese ngonyaka odlule mayelana nokuthi yimiphi imikhiqizo abayikhethile nokuthi yiziphi izinguquko abazenzile lapho benza kanjalo. Imiphumela ingafingqwa ngokulandelayo: Ukuphumula nokuzijabulisa, i-High-Tech, Izici zokukhanyisa, i-Accent Wall, i-Modern Mix, nokuningi.
- Imikhiqizo Yokugeza -
OnUkuguqulwa Kwezindawo Zokugeza Kuya Emishaweni
Inani elikhulayo labanini bamakhaya baseMelika babheka indlu yokugezela njengendawo yokuphumula, kanti u-41% wabaninikhaya abangu-1,594 bahlolisisiwe bathi bayaphumula futhi baphumule endlini yokugezela. Izindlela eziyinhloko zokuphumula ziyajuluka futhi ziyageza, ngamaphesenti angama-55 abaphendulile athi ukungena kubhavu kubasiza ukuba baphumule.
Ngenkathi umsebenzi wokuphumula wamabhavu ubonwa, ngaphezu kwamaphesenti angama-50 abaphendulile abavuselele izindlu zabo zokugeza kulo nyaka abakaze basebenzise obhavu babo, kanti amaphesenti angama-23 aze athi asusile. Futhi kulabo abaphendulile abakhethe ukususa obhavu babo, ama-fourths akhethe ukushintshela eshaweni kunalokho, ngamaphesenti angama-54 abika ukuthi andisa usayizi wekhanda lawo lokugeza, kusuka ekushintsheni isakhiwo sendlu yangasese (amaphesenti angama-45) nokukhulisa ubukhulu bendlu yabo yokugezela (Amaphesenti angama-20).
Abantu abaningi bakhetha amakhabethe wangasese wangasese
Phakathi kwalabo abakhethe ukufaka amakhabethe abo okugezela, ama-36% akhethe amakhabethe wokugezela angokwezifiso kwathi amanye ama-21% akhetha amakhabethe okugezela angajwayelekile, okukhombisa iqiniso lokuthi amakhabethe endawo yokugezela nawo aseqala ukungena emakethe yase-US, kuyilapho ama-28% akhethe amakhabethe okugeza isikhala esiningi sokugcina. Ngokwesitayela sekhabethe lokugezela, ama-56% abaphendulile akhetha amakhabethe okugezela akhelwe ngaphakathi, alandelwa indawo ezimele (28%) kanye nodonga olufakwe odongeni (15%), ngenani labaphenduli abakhetha imikhiqizo enezindonga enyuka ngamaphesenti ama-4.
ToAmathoyilethi aSmart Ayedume Kakhulu.
Kulo nyaka, amaphesenti angu-17 wabaninimakhaya baseMelika abakhethe ukushintshela endlini yangasese ngombhobho, anyuke ngamaphesenti amahlanu kusukela ngonyaka odlule; Amaphesenti ayi-5 namaphesenti ayi-14 abaphendulile, ngokulandelana, akhethe izindlu zangasese ezinezici zokuzihlanza nezihlalo ezifudumele, nazo ezifakwe izindlu zangasese ezihlakaniphile. Ngaphezu kwalokho, i-anti-splash, isibani sasebusuku esakhelwe ngaphakathi, i-lid flip ezenzakalelayo, i-deodorization okuzenzakalelayo nezinye izici nakho kudonse amehlo.
Isidingo seBasin Siyahambisana Nonyaka Ophelile
Ukuthandwa kwezici ezahlukahlukene zebheshi bekungashintshiwe kusuka ngonyaka owedlule, ngenani elikhulu labaninikhaya baseMelika abakhetha ukufaka endaweni yabo ibheshi nge-undermount (65%), ilandelwe ngama-recessed (17%) kanye namatafula we-countertop (9%) . Ngaphezu kwalokho, ama-68% nawo akhethe ukusebenzisa umcengezi ophindwe kabili, okucishe kube amaphesenti afanayo neminyaka emibili edlule.
SUkulondolozwa kwamanzi, ama-sensor ompompi akhathazekile kakhulu
Amaphesenti ayisishiyagalombili nesikhombisa abo bonke abaphendulile bashintshe ompompi babo. Kulabo abashintshe ompompi babo, amaphesenti angama-48 abaninikhaya babephethe okungenani ompompi abasha abanobuchwepheshe obusezingeni eliphezulu. Phakathi kwabo, ama-28% ompompi abasha babaphenduli banezici zokonga amanzi, amaphesenti ama-4 amaphuzu angaphansi kunanyakenye; U-16% wabanikazi bompompi abasha abayinamatheli iminwe; Ama-5% ompompi abasha angathintwa, leli nani lenyuke ngamaphesenti ama-2 ngaphezu konyaka odlule, okukhombisa ukuthi ompompi bezinzwa bayanda kakhulu.
Izibani ze-▌LED, Ukungena Esibukweni Sokugeza Okuncanyelwayo Izici
Okwezibuko, amaphesenti angama-20 akhethe imikhiqizo enamalambu e-LED, amaphesenti ayisithupha aphakeme kunangonyaka odlule, futhi bekukhona nesidingo esithile sokuzivikela, ngamaphesenti ayi-14 abekhetha imikhiqizo enalesi sici.
- Isikhala sokugeza -
IleIthayela Kusengokujwayelekile Kwendawo Yokugeza
Mayelana nokulungiswa kwezindonga zeshawa naphansi, inani elikhulu labantu likhethe imikhiqizo yethayela, ngama-70% akhetha ithayela lezindonga, ukwanda kwamaphesenti ama-4 wamaphesenti unyaka nonyaka. Kokubili izindonga naphansi, abantu abangaphezu kuka-10% bakhetha imabula, kepha ukukhetha kwemabula phansi kwehle ngamaphesenti ama-5, okukhombisa inani elikhulayo labantu elibheka izindaba zokuphepha ezindlini zangasese.
Izindawo ze--Non-Shower Zaqala Izindonga Zokuhlobisa Ezithandwayo
Ezindaweni okungagezwa kuzo endlini yokugezela, abantu abaningi bakhethe ukushintsha amathayili ngomkhiqizo wokuhlobisa kakhulu kunasendaweni yokugeza, nge-77% yabaphenduli abakhetha le mikhiqizo, ephakeme kakhulu kunama-26% akhethe amathayili. Kodwa-ke, ezindaweni ezingekho eshaweni phansi, inani elikhulu labantu (59%) lisakhetha ukusebenzisa imikhiqizo yethayela.
RevaUkusetshenziswa Kwesitayela Sesimanje
Kulo nyaka, amaphesenti angama-20 abaphendulile athi bazokhetha isitayela sesimanje sendlu yabo yokugezela, okuyinombolo efanayo nango-2019 namaphesenti ayi-5 aphezulu kunango-2018, okukhombisa ukuthi isitayela sesimanje sihlala siyisitayela esivelele ekwakhiweni kwendlu yangasese yaseMelika. Lokhu kuqhathaniswa namaphesenti ayi-18 wabaninikhaya abakhetha i-Transitional, ehlise ngamaphesenti ama-3 kusuka ku-2019, kanti inani labantu abakhetha i-Contemporary, Traditional and Pastoral lisazinzile futhi lenyukile kusuka ngonyaka odlule.
Okumhlophe Kusala Kubusa.
Ngokuya ngombala, umhlophe uhlala umbala ogqamile, nabantu abaningi bekhetha okumhlophe njengombala oyinhloko wamakhabethe okugezela, ama-countertops, izindonga zeshawa nezindonga ezijwayelekile. Kuma-countertops, ngaphezu kuka-51% wabaphenduli bakhethe okumhlophe, ngaphambi kombala (15%), okumpunga (14%) no-beige (9%), ngenani labaphenduli abakhethe ukwehla kombala ngamaphuzu ayi-4.
▌8 Kwabaphenduli Abayi-10 Bakhethe Ukushintsha Ukukhanya Kwabo Kwangasese.
Kulo nyaka, abaphenduli abangu-8 kwabangu-10 bakhethe ukuvuselela izibani zabo zangasese. Phakathi kwazo, ukukhethwa okukhulu kwamalambu abekwe odongeni (58%) namalambu ahlehlisiwe (55%), kulandelwa amalambu eshawa (32%), amalambu abalandeli (25%), izibani zesibuko (17%), lapho ukukhetha izibani zesibuko zikhuphuke ngamaphesenti ama-4 ngaphezu konyaka odlule, okufanele ukunakwa ngamakhabethe okugezela nabakhiqizi bezibuko zokugeza.
- Amanye Amaphuzu -
1, Izindleko ezijwayelekile zokuvuselelwa kwabaninikhaya base-US zingama- $ 8,000, cishe i-RMB 53,000.
2, Ngaphambi kokulungisa indlu yokugezela, i-69% yabaphenduli bathi bebevele bengagculisekile ngendlu yokugezela endala, isuka ku-59% ngo-2019.
3, izikhalazo ezinkulu zabaninimakhaya base-US mayelana nezindlu zabo zokugezela zimayelana nendawo yokugcina eyanele (34%), isikhala esincane kakhulu seshawa (34%), izibani ezinganele (29%) nendawo yokubala elinganiselwe (25%).
4, 59% wabaphendulile bathe bazophumula endlini yangasese, okunyuke ngamaphesenti ama-4 kusuka ngonyaka odlule.
5, Cishe amakota amathathu abaphendulile anezibuko ezimbili noma ngaphezulu egumbini labo lokugezela.
6, Abane kwabayisihlanu kwabaphendulile bangaqasha uchwepheshe ozosiza ekuvuseleleni indawo yabo yokugezela, lapho abavuseleli benesilinganiso esiphezulu sokubamba iqhaza ngamaphesenti angama-43, kulandelwa abasebenza ezindlini zokugezela (amaphesenti angama-20) nabakhi bezindlu zangasese (amaphesenti ayi-12).
Edlule :: Kukhethwe yi-NASA, Lawa mathoyilethi amathathu aya enyangeni! Olandelayo: Okufanele Ukwenze Lapho Uthenga Umpompi Wekhishi